कमरेड कोमल वलीलाई खुलापत्र : विद्रोह होइन, अब घर गरेर खानोस् - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | १८ कार्तिक २०७४, शनिबार १४:०४ |
कमरेड कोमल वली दिदीज्यूमा सानो निवेदन,
कोमल र रेखालाई राप्रपाले झ्यालबाट छिराएर अब्बल दर्जाको बनाउनु कमल दाइको भुल हो। ‘भिमकाय बनाए दाइले, अब झ्यालबाट होइन मुलढोका फोरेर निस्कन्छन् है भाइ हेर्दैजानु’ भनी अमेरिकाबाट प्रेम चौलागाई दाइले भनेको केही समयमा नै सत्य साबित भएको थियो।
उनले पछि भनेका थिए, कोमल एमालेमा एक महिना पनि टिक्न सक्तिनन्। आखिर अबिर माला सहित शंखघोष गर्दै एमालेमा छिरेको एक महिना पनि नपुग्दै कमल थापाले बनाएको अब्बल सुकेनाशमा पुगेर हरायो, आखिर किन ?
राप्रपाको सामान्य कार्यकर्ता भएकाले चेलीले छोडेर गएपनि म एउटा माइती हुँ। माइतीमा रहँदा अब्बल र भिमकाय बनाएकै हो। तर पोइल गएपछि सासुले ताला चाबी दिइनन् भनी विद्रोह गर्ने होइन, निर्वाचन आयोगमा बुझाएको स्वतन्त्र उम्मेद्वाररुपी नालिस आजै फिर्ता लिएर घर गरि खानोस्। माइतीले दिन सक्ने सुझाव यतिनै हो।
Previousयस कारण गरियो कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशीको उम्मेदवारी खारेज
Nextशाहरुख खानकी पत्नीलार्ई पत्रकारले उडाए
किन फिर्ता लिए मेयर चौधरीले नाकको डाँडी भाच्ने अभिव्यक्ति ?
२७ जेष्ठ २०७६, सोमबार ०१:०९